Helitaanka Dayactirka iyo Soo kabashada Qalabka. Helitaanka Dayactir Software.
maxaad DataNumen Access Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee soo-kabashada Helitaanka. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Access Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Access Repair sigaar cabaya tartanka
Sikastaba in kastoo markii hore aan moodayay inay tani tahay lacag aad u fara badan oo lagu bixiyo barnaamij yar,
Sikastaba in kastoo markii hore aan moodayay inay tani tahay lacag aad u fara badan oo lagu bixiyo barnaamij yar, DataNumen Access Repair dib ayaan u soo ceshanay keydkeena sidaa darteed aad ayaan u faraxsanahay;)
Wow barnaamijyadiinna ragga ahi waa wax laga cabsado waxaan soo degsaday softiweerkii tijaabada ahaa waxayna awoodday inay i tusto dhammaan miisaskii aan ku lahaa si sax ah. Sofware
Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo noqotid. Waxaan tan iyo markii aan iibsaday softiweerka oo aan helay cinwaanka si aan toos ugula soo dego barnaamijka. Waan rakibay wayna shaqeysay
DataNumen Access Repair ka soo kabanayo xog ka badan wax soo saar kasta oo kale oo aan isticmaalay. Waxay iga caawisay inaan keydiyo keydad badan oo macluumaad la kharribay. Aniga
Costume Kheyraadka Waxsoosaarka
Santo Domingo, Jamhuuriyadda Dominican
Diisambar 30th, 2018
Xalka La Soco Khaladaadka Caadiga Ah Sababtoo ah Soo Gal Musuqmaasuqa Macluumaadka
Qaabka Database aan la aqoonsan
Mashiinka keydka xogta ee Microsoft Jet ma uusan helin shayga 'xxxx'.
Diiwaanada (yada) lama aqrin karo; majiro ogolaansho akhris 'xxxx'.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Access Repair v3.8
Taageero lagu dayactirayo Microsoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 iyo Helitaanka Xafiiska 365 keydka macluumaadka.
Taageero si loo soo ceshado qaabdhismeedka iyo diiwaanka miisaska keydka macluumaadka.
Taageero soo kabashada MEMO iyo OLE.
Taageerada si kabsado miisaska la tirtiray iyo diiwaanada gudaha macluumaadka
Taageero si dib loogu soo cesho beeraha xisaabaadka iyo tilmaamaha.
Taageero si loo soo celiyo xiriirka.
Taageero si aad uga soo kabato weydiimaha.
Taageer si aad u soo ceshato keydka macluumaadka sirta ah ee sirta ah.
Taageero si aad u hagaajiso Access mdb iyo faylasha accdb ee warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo helo oo loo xusho Access mdb iyo faylasha accdb si loogu hagaajiyo kombiyuutarka maxalliga ah, sida ku cad shuruudaha qaarkood.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah Access mdb iyo faylasha accdb.
Ku taageer isdhexgalka Windows Explorer, markaa waxaad ku dayactiri kartaa mdb iyo faylka accdb oo leh menu macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen Access Repair si loo soo ceshado Macluumaadka Helitaanka Musuqmaasuqa
Marka macluumaadkaaga Microsoft Access (.mdb ama .accdb faylasha) ay musuqmaasuqmaan ama waxyeelloobaan oo aadan si caadi ah u furi karin, waad isticmaali kartaa DataNumen Access Repair si loo baaro feylasha lagana soo ceshado xogta iyaga intii suurtagal ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii faylal ah ee gala "mdb / accdb" khariban ama waxyeeloobay DataNumen Access Repair, fadlan xir Microsoft Access iyo wixii kale ee codsi ah ee wax ka beddeli kara faylka mdb / accdb.
Xulo feylka mdb / accdb Access ee kharribmay ama dhaawacmay:
Waxaad si toos ah ugu soo dari kartaa magaca faylka mdb / accdb ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
Marka la eego, DataNumen Access Repair waxay keydineysaa keydka keydka macluumaadka ee go'an fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.mdb, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha mdb / accdb. Tusaale ahaan, faylka Damaged.mdb, magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqonayaa Damaged_fixed.mdb. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Click ah batoonka, iyo DataNumen Access Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta ilaha mdb / accdb. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka kadib, haddii ilaha mdb / accdb xogta si guul leh loo hagaajin karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furan kartaa kaydinta xogta mdb / accdb go'an Microsoft Access ama codsiyada kale.
DataNumen Access Repair 3.3 waxaa la sii daayay Diseembar 10, 2020
DataNumen Access Repair 3.1 waxaa la sii daayay Oktoobar 31th, 2020
DataNumen Access Repair 3.0 waxaa la sii daayay Maajo 27th, 2020
DataNumen Access Repair 2.9 waxaa la sii daayay Nofeembar 18th, 2019
DataNumen Access Repair 2.8 waxaa la sii daayay Ogosto 5th, 2019
DataNumen Access Repair 2.7 waxaa la sii daayay Abriil 18, 2019
DataNumen Access Repair 2.6 waxaa la sii daayay Janaayo 21th, 2019
Helitaanka Taageerada 2019.
DataNumen Access Repair 2.5 ayaa la sii daayay Oktoobar 22nd, 2018
Helitaanka Taageerada ee Xafiiska 365.
DataNumen Access Repair 2.3 waxaa la sii daayay Febraayo 11th, 2018
Helitaanka Taageerada 2016.
DataNumen Access Repair 2.2 waxaa la sii daayay 10 Ogosto, 2013
Hagaajinta iswaafajinta arjiga DAO iyo Access.
DataNumen Access Repair 2.1 waxaa la sii daayay May 15, 2009
DataNumen Access Repair 2.0 waxaa la sii daayay 16 Luulyo, 2008
Taageerada Galitaanka macluumaadka 2007.
DataNumen Access Repair 1.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 19, 2006
Hagaaji mashiinka dayactirka.
Taageero si loo helo loona xusho faylasha MDB ee lagu hagaajinayo kombiyuutarka maxalliga ah, sida ku cad shuruudaha raadinta qaarkood.
DataNumen Access Repair 1.1 waxaa la sii daayay Diseembar 20, 2005
Taageero si dib loogu soo cesho beeraha tirada.
DataNumen Access Repair 1.0 waxaa la sii daayay Juun 18th, 2004
Taageero lagu dayactirayo Microsoft Access 95, 97, 2000, XP iyo 2003.
Taageer si loo soo ceshado qaabdhismeedka iyo diiwaanka miisaska keydka macluumaadka.
Taageero si loo soo ceshado miisaska la tirtiray iyo diiwaanada ku jira keydka macluumaadka.
Taageero si aad ugu hagaajiso Faylasha mdb galalka warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah faylasha Access mdb.
Ku taageer isdhexgalka Windows Explorer, markaa waxaad ku hagaajin kartaa feylka mdb faylka macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.